Naleon’Ilay Mpikatroka Israeliana Nifidy Ny Fonja Toy Izay Hanao Raharaha Miaramila Ho Fanoherana Ny Fibodoana · Global Voices teny Malagasy
Naleon'Ilay Mpikatroka Israeliana Nifidy Ny Fonja Toy Izay Hanao Raharaha Miaramila Ho Fanoherana Ny Fibodoana
Voadika ny 04 Janoary 2018 17:49 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Português, Italiano, كوردی, 日本語, English
“Tsy misy ny fanamarinana fanjanahana ny hafa. Tsy misy fanjakana ara-môraly.” Pikantsarin'i Mattan Helman avy amin'ny ” Miatrika Lalàna Avokoa Ny Foto-pisainana sy ny Feon'ny Fieritreretana ” navoakan'ny SocialTV tao amin'ny YouTube.
Nandà ny hanao raharaha miaramila Israeliana i Mattan Helman, 20 taona, na dia midika fandikana ny lalàn'ny firenena aza ny fanaovany izany.
Mpikatroka avy ao HaOgen any Israely afovoany, 26 kilaometatra any avaratra andrefan'i Tel Aviv i Helman. Notendrena ho any amin'ny Borigadin'i Nahal, iray amin'ireo Tafim-piarovana lsraeliana (IDF) lehibe indrindra miasa any amin'ireo faritany Palestiniana nobodoina izy, kanefa nihevitra izy fa ny fandrosoana amin'izany dia midika fanekena ny fifehezan'i Israely “tsy ara-drariny” ny Morondrano Andrefana (anisan'izany i Jerosalema Atsinanana) sy i Gaza.
Tamin'ny fotoana nanoratana, manefa ny saziny faharoa i Helman , 20 andro, ao amin'ny Fonjan'ny Miaramila Faha 6, nanomboka ny 18 Desambra 2017.
Niresaka momba ny fanapahan-keviny i Helman tamin'ny antsafa vao haingana niaraka tamin'ny vondrona mpikatroka Israeliana SocialTV, izay nozarain'ny vondrona fanta-daza hafa toy ny Jewish Voice for Peace (Feon'ny Jiosy Mandala Fandriampahalemana) .
Nalain'i Israely ny faritany nandritra ny adin'ny Israeliana sy ny Arabo tamin'ny taona 1967, izay antsoina amin'ny teny Arabo hoe “الككسة” (An-Naksah, “ny fihemorana”), ary mbola manohy ihany ny fibodoana izany izy ireo 50 taona taty aoriana sady manitatra ny fitakiany ara-tany na dia teo aza ny fanamelohan'ny vondrom-piarahamonina iraisam-pirenena.
Tamin'ny taona 2004, ohatra, nanambara ny Fitsarana Iraisam-pirenena ICJ), sampam-pitsaràna voalohany ao amin'ny Firenena Mikambana fa tsy ara-dalàna ny rindrina natsangan'i Israely ao anatin'ny faritra sy ny manodidina ny Morondrano Andrefana satria manapaka ny faritany Palestiniana izany, ary nampitandrina izy ireo fa ” mety hanjary toy ny fanjanahana ny tany Palestiniana, ary hanakana ny zon'ny Palestiniana hanjaka ao aminy izany”.
Ity manaraka ity ny sary mitondra ny lohateny hoe “Palestina Mihena, Isiraely Miitatra” avy amin'ny vondrona fanaraha-maso ny lahatahiry Visualizing Palestine izay mampiseho ny “fitaovana ara-tafika, ara-pitsarana ary ara-bola nampiasaina tamin'ny fanovàna tsikelikely an'i Palestina ara-tantara ho Israely ‘Lehibe’, ary mampiseho an-tsarintany ny fanitarana ny faritany izay voafaritra ho ‘tanim-panjakana’ Israeliana ankehitriny ary ahitana ireo Palestiniana voahilika tamin'ny fonenany amin'izao fotoana izao na dia mizaka zom-pirenena Isiraeliana aza. “
Tao anatin'ny antsafa, nilaza i Helman fa fantany fa hogadraina izy noho ny fanapahan-keviny, saingy vonona ny hanaiky izany izy:
Fantatro fa mandika ny lalàna ilay fandavana, kanefa ny foto-pisainana, ny feon'ny fieritreretana ary ny fetra no mifanohitra amin'ny lalàna rehetra.
Nisy maro ny tsy rariny ara-tsosialy kanefa ara-dalàna teo aloha. Tranga tsy ara-dalàna avokoa ny famonoana faobe tany Eoropa, ny fanavakavaham-bolokoditra tany Afrika Atsimo ary ny fanandevozana tany Etazonia.
Ankatoavina eo ambanin'ny lalàna iraisam-pirenena ny fandavana ara-moraly tsy hanao ny fanompoana miaramila. Araka ny nohazavain'ny biraon'ny Firenena Mikambana Quacker tao amin'ny tatitra tamin'ny volana Janoary 2015:
Na ny Komity Mpiaro ny Zon'olombelona na ny Filankevitry ny Firenena Mikambana momba ny Zon'olombelona dia nankatoa ny zon'ny fandavan'ny feon'ny fieritreretana amin'ny raharaha miaramila ho anisan'ny zo hieritreritra malalaka, ny zon'ny feon'ny fieritreretana sy ny fivavahana izay samy voasoratra ao amin'ny andininy Faha-18 ao amin'ny Fanambarana Iraisam-pirenena momba ny Zon'olombelona sy ny Fifanekena Iraisam-pirenena momba ny Zo Sivily sy Politika.
Na izany aza, dia mety hogadraina ireo izay mandà noho ny feon'ny fieritreretana tsy hanao raharaha miaramila any Israely.
Nilaza i Helman fa efa ela izy no nanapa-kevitra momba izany. Nikaroka ilay lohahevitra izy tany am-pianarana tamin'izy tao amin'ny taona fahasivy ary nanontany ny tenany fanontaniana miisa telo:
Inona no ataontsika any, inona no ataon'izany amin'ny fiarahamonintsika ary inona no ataoko ao anatin'izany ?
Rehefa nilaza izany tamin'ny ray aman-dreniny izy araka ny fanazavany dia tena sarotra ho azy ireo ny nandray izany tamin'ny voalohany saingy nahatakatra sy nanohana azy ihany izy ireo ny farany.
Nanamafy i Helman fa “tsy lalàna moraly ny lalàna mitaky ny fanaovana raharaha miaramila izay mangeja ny vahoaka iray manontolo ary tsy voatery hankatò izany izy”.
Nilaza izy fa na dia tsy mandà ny fitakian'ny tafika aza dia “tokony ho ampiasaina amin'ny fiarovana ihany izany” ary ” ny tafika izay mibodo ny vondrom-bahoaka iray manontolo dia tsy fiarovana. Tsy fiarovana ny fibodoana. “
Farany, nahoana i Helman no tsy niditra tao amin'ny tafika fa nanandrana nanova ny politika tao anatiny, nanazava izy fa tsy ho vita izany:
Marina fa misy ireo izay ao amin'ny tafika tsy mitovy hevitra amin'ny politikan'ny fibodoana, saingy mbola mandray anjara amin'izany izy ireo.
Nahazo fanohanana avy amin'ny Isiraeliana [sasany] ny safidin'i Helman. Rehefa niditra tao amin'ny biraon'ny fandraisana miaramila ary nanambara ny fandavany tsy handray anjara, maro ireo mpikatroka Israeliana no nanohana azy, nanapi-maso ary nitazona sora-baventy milaza hoe “Atsaharo ny fanapena-masonareo amin'ny heloka bevavan'ny fibodoana”.
Nilaza i Omri Baranes mpikatroka iray tao amin'ny fihetsiketsehana :
Takatro isa-minitra fa manan-danja sy zava-dehibe ankehitriny ny fanoherana ny drafitra sy ny fandehanana any am-ponja . Miaina ao anatin'ny fanjakana fasista sy manavakavaka isika, feno fandrangitana. Matanjaka isika na dia vondrona kely aza .
Nogadraina imbetsaka i Baranes tamin'izy 18 taona noho ny fandavany hanompo tao amin'ny IDF, niaraka tamin'i Tair Kaminer. Tamin'ny volana Jona 2016, nisazy nandritra ny 170 andro tao amin'ny fonjan'ny miaramila i Kaminer Tair Kaminer rehefa nifarana ny fe-potoanany fahadimy, talohan'ny nahazoany fanamelohana fahaenina.
Tsy hoe nandà noho ny feon'ny fieritreretana tsy hanao raharaha miaramila ihany ry zareo. Tamin'ny taona 2003, nisy miaramila IDF miisa 1.100 teo ho eo no nilaza ” fa tsy hanao raharaha any amin'ny faritra bodoin'i Isiraely”.
Tamin'ny taona 1982 no niseho ireo “Refuseniks” voalohany, araka ny niantsoana azy ireo, ho setrin'ny fanafihan'i Israely an'i Libanona. Tamin'izany fotoana izany, olona miisa 168 no nandà ny fanompoana araka ny fahatsapan'izy ireo azy sy araka ny tenin'ny vondrona Isiraeliana Yesh Gvul fa ” fihetsika feno herisetra miharihary sy tsy ilaina ” ny fanafihana.
Ao anatin'ny lisitry ny Refuseniks 2017, nanambara ilay antsoina hoe ‘ny taratasin'ny zokiolona 2017′ ny Israel Social TV , izay nosoniavin'ireo mpanohitra ny drafitra miisa 60 mahery tao amin'ny lahatsary iray manasongadina ny antsafa niarahana tamin'ny sasany tamin'izy ireo.
Mba hanomezana ohatra roa fanampiny ao anatin'ny maro:
Tamin'ny taona 2016, nosamborina sy nogadrain'ny manampahefana miaramila i Tamar Alon, 18 taona, sy Tamar Ze'evi, 19 taona satria tsy nanaiky ny hanompo tany amin'ireo faritany voabodo izy ireo. Hoy i Alon:
Mino aho fa tsy hamela antsika hiaro ny fanjakana demaokratika sy ho olona afaka ao amin'ny tanintsika ny làlana mankany amin'ny ady, ny herisetra ary ny famoretana .
Nanamarina ny fanapaha-keviny tamin’ “ny fanoherana ny raharaha miaramila noho ny feon'ny fieritreretana” i Atalya Ben-Abba, 19 taona avy any Jerosalema, hoy izy hoe:
Mila mamarana ny fibodoana isika mba hiarovana ny olon-drehetra ao Israely sy Palestina .
Ankoatra izany, nandefa taratasy ho an'ny Minisitry ny Fiarovana Isiraeliana Avigdor Lieberman ” mangataka azy hamerina hijery ny raharaha momba an'i Helman ny War Resister’s International (Mpanohitra ny ady Iraisampirenena), tambajotra manerantany mpandala ny filaminana sy manohitra ny tafika miaraka amin'ireo vondrona miisa 90 any amin'ny firenena miisa 40.